Tim Cook anokurudzira Donald Trump kuti asafambe kubva muchibvumirano chemamiriro ekunze eParis | Ndinobva mac
VaDonald Trump vanoita kunge havana kumbobvira vatenda kuti shanduko yemamiriro ekunze ichokwadi iyo inotibata isu tese uye pakati peguhwa rave kutenderera mumasvondo apfuura, makuhwa anosimbisa kuti United States inogona kubvisa rutsigiro rwayo pakuzvipira uku, vatungamiriri vakati wandei Makambani makuru eAmerican tech akabata Donald Trump. Chipiri chapfuura, Tim Cook akabata Donald Trump kuti abvunze purezidhendi weUnited States kuti arege kusiya chibvumirano ichi pamamiriro ekunze, chibvumirano chakavimbiswa nenyika makumi mashanu neshanu. Nekuda kwechibvumirano ichi, gasi yekupisa gasi inodzikiswa, izvo zvinodzora kudziya kwepasi.
Muchibvumirano chakasvikwa kumusangano wekupedzisira wekushanduka kwemamiriro ekunze, United States yakazvipira kudzikisa mweya unobuda pakati pe26 ne28% mumakore gumi anotevera. Marasha sosi yesimba iri chimwe chezvinhu zvinosvibisa kwazvo pasi rose. Kubva kuApple vanga vachiita zvese zvinobvira kwemakore akati wandei kuitira kuti makambani anogadzira zvikamu zvakasiyana zvezvigadzirwa zvavo asawane simba ravo kubva kune aya marudzi enzvimbo, chinhu chinozivikanwa muChina.
Handizive kuti Paris ichaenda nenzira ipi, asi ini ndaita zvese zvandinogona kuraira zvakananga kuPOTUS, kuburikidza nevamwe muWH & kuburikidza nemakanzuru, kuti isu tinosara
- Elon musk (@elonmusk) Dai 31, 2017
Asi VaTrump, avo vanopesana nemitemo yemamiriro ekunze yakatsiga panguva yemushandirapamwe, vakazivisa nezuro kuti svondo rino vachatora danho panyaya iyi. Kune ake chikamu Elon Musk, anova mumwe wedare remakurukota raTrump, anotsigira kuti akaita zvese zvinobvira kuyedza kugonesa VaTrump kuti varege kusiya kuzvipira kweUnited States kumusangano wekupedzisira wekushanduka kwemamiriro ekunze wakaitirwa muParis. Mukutanga kwaMay, maCEO emakambani makuru makumi matatu muUnited States vakatumira tsamba vachimuyambira nezvemhedzisiro yakaipa kuUnited States nepasirese repasi kana kambani ikasiya kuzvipira uku.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Tim Cook anokurudzira Donald Trump kuti asafambe kubva pachibvumirano chemamiriro ekunze eParis
Vagadziri vePixelmator vanga vachigadzira chimwe chinhu chikuru kwemakore